Maqaal: Midnimo iyo wadajirta looga baahan yahay soomaalida! | ogaden24
Maqaal: Midnimo iyo wadajirta looga baahan yahay soomaalida!
Maanta ayaa waxaan arkay nin ka tirsan golaha xil-dhibaannada ( Golaha Xilmagutayaasha) deegaanka; Salaan ka dib waxaan ku idhi; ninyahow tiro ahaan maba yaridine, maxaa tayada xubada idiinku wacan oo huga idinaka qaaday, oo aad gacanta la taagtaan ma Call-box ayaad tihiin oo habeenkii ayaa lacag la idinku shubtaa? Waxa uu yidhi; haddaan nahay golaha xildhibaannada (Xilma-gutayaasha) taariikhda baal-madow ayaan ka galnay ee hal qof ah oo naga mid ah ilaahay dib uma soo celiyo! Waxaan ku idhi maanta shaqo fiican ayaad qabateen maaddaama aad xanaasadda ka xayuubiseen kuwii ummadda sharafta ka xayuubiyey. Laakiin si uun baad u silloontihiin! Waa runtaa oo markii horeba dad soo tartamay ma aannaan ahayn ee xulasho ayaan ku nimid dadka iyo deegaanka ba waan khiyaameynay! Sababtu waxaa weeye; wax aan og nahay inuu danaha shacabka liddi ku yahay ayaan gacmaha u taagnaa! Ayuu yidhi!
Waxaan ku idhi; xaqa soomaalida ka maqan maad ka hadashaan, hadda waxaa taagan dhawr guddi oo la ansixiyey (guddiga dib-u-heshiisiinta iyo guddiga isirka iyo xuduudaha) Soomaalidana waa lagu bahdilaye waa sidee maad ka hadashaan? Kulahaa war annaga ajande la soo diyaariyey uun baan gacanta u taagnaa ee wax ba kama hadli karno (Waxna ma diidno, waxbana kama doodno) xataa waxba isma waydiinno! Dadkaas ayaa idin matala, sidaas u dhaqmaya ee ma fadhi baa idiinyaal? Barri haddii adis ababa looga yeedho waxay gacanta u taagi in dhul-soomaliyeed oromo iyo canfar la siiyo!
Talo ahaan waxaan shacabka soomaali-galbeed u soo jeedinayaaa; isku duubni iyo midnimo hala idinka helo, isbaddalka ilaashada si’aan dib la idiinku celin! Ma jiro xaq idinka dhex-diinna ku kala maqan ee ishiinnu meel fog wax haka aragto! Yaan lagu kadsoomin dabinnka iyo surgimaha cadowgu daadinayo! Si fudud ha ugu dhicina shirqoolka cadowgiinna. Waxaad ogaataan qabyaaladda, jahliga, musuq-maassuqa, wax isdabamarinta iyo waddaniyad la’aanta in lagu fashilmo!
Isu laabxaadhnaada, isjeclaada, kalgacal iyo maxabbo ku wada noolaada oo tabashada dhexdiinna ah si hoose u xallista, sirtiinna ka ilaaliya cadowga aad is haysaan ee fadhigiisu yahay buuraleyda galbeed idinka xigtaa (Highlands) ka kora jaajuusnimada iyo isbasaasidda. Ha isu loogina cawga soo jireenka ah ee ay dhibayso midnimadiinna iyo wada jirkiinnuba! Ka faa’iideysta fursadda aad maanta haysataan! Dhalliil kasta oo uu lee yahay waxaad haystaan hoggaamiye aragti ummadeed leh (Waa la idiin soo xulay, laakiin waa nin idin garabtaagan) ku dadaala inaan mardanbe addis ababa madaxwayne la idiinka soo doorin. Wixii hadda ka danbeeya; Waa inaad idinku xulataan cidda idin hagaysa!
Fursad iyo wakhti siiya kuwa aad u doorataan inay idin hoggaamiyaan. Ha isku dacwaynina cadowga ee idinku gogosha isu dhigta oo ku kala garbaxa. Isqanciya oo isu tanaasula, ixtiraama madaxda idin hoggaamineysa. Hadday qabyaalad, musuq, eex iyo nin jeclaysi ku kacaan idinku saxa oo wax u sheega (Kor iyo hoos ba ugu dhiga). Niyadsami ku wada noolaada. Dadyahow soomaaliyeed ama nolol sharaf iyo gobanimo leh ku noolaada, ama geeri sharaf leh dhinta. Cadow raba inuu idin kala qayb-qaybiyo marnaba fursad ha siinnina! Awrkiraaleyaasha diida jadalkooda oo dhaga la furaysta! Garabsiiya cid kasta oo isu taagta danihiinna! Qog kastaa niyada ha galiyo in waxa uu walaalkiisa soomaaliyeed helay inuu isna helay. Sedbursiga iyo dulmiga itoobiya idinku hayso hoos ha loo fiiriyo. Halkan idiinku faahfaahin maayo ee waxaa jirta siyaabo badan oo aas kula loollami kartaan, asaaggiin.
Iga gaadhsiiya soomaaliga dulman ee moodaya xaqa ka maqan inuu walaakiisa soomaaliyeed ka haysto!
W/Q: Gafdiid Khaliif